VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်:း(၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (၅၀၀ မီလီလီတာ ဘူး) တစ်နာရီတွင် ဘူးပေါင်း ၃၀၀၀
အာမခံ : ၁ နှစ်
စံ : : ISO 9001:2015
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ဖွညျ့စကျ၊ ,	ဘူးများကို ရေဖြည့်ပေးသောစက်
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACGF3000
VACGF3000 AUTOMATIC BOTTLE FILLING 6-IN-1 MACHINE6automatic steps integrated This machine is further improved in compared to the previous VACGF2000 4-in-1 filling machine.
VACGF 30006in1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်မှာ အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၆ ဆင့် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစက်က ယခင် VACGF 20004in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ထက် ပိုပြီးခေတ်မီလာပါတယ်။
Viet An is proud to be the leading supplier in Vietnam specializing automatic6in 1 bottle filling machine in Vietnam
Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ဂုဏ်ယူစွာဖြင့်6in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသော စက်များကို ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေပါသည်။
Members of Viet An Company (Viet An ကုမ္ပဏီမှ အဖွဲ့ဝင်များ)
The product offers an improved capacity of 3,000 bottles/hour while ensuring hygiene and safety. Let's learn more about this Automatic bottle filling machine with6VACGF3000 automatic steps below.
ဒီစက်က တစ်နာရီကို ပုလင်းပေါင်း ၃၀၀၀ ကို ဖြည့်ပေးနိုင်ပြီး သန့်ရှင်းကာ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်စေပါတယ်။ VACGF 3000 ရဲ့အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ကို အောက်မှာလေ့လာကြည့်ရအောင်။
VACGF3000 AUTOMATIC BOTTLE FILLING 6-IN-1 MACHINE
Viet An General Trading Joint Stock Company is proud to bealeading company in manufacturing, importing, distributing and installing automatic bottle filling machines, including this VACGF30006in 1 automatic filling machine.
Viet An အထွေထွေ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး ကုမ္ပဏီမှ ယခု VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်အပါအ၀င် အခြားစက်များကို ထုတ်လုပ် တင်ပို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့နေရာမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်ရတာ အလွန်ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Formerly known as Viet An General Trading Co., Ltd. and then equitised in August 2009, after nearly 20 years of development and growth, with the unceasing efforts of the Board of Directors and all staff. members in the company as well as the motto “Say no to fake goods” Viet An has supplied genuine and high quality products to the market.
Viet An အထွေထွေကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဟု လူသိများခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ရှယ်ယာရှင်တွေများလာပါတယ်။ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ ၀န်ထမ်းအားလုံးရဲ့ နှစ် ၂၀ နီးပါး မလျှော့သော ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ 'ပစ္စည်းအတုတွေကို ငြင်းပယ်ခြင်း'ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားနိုင်ပြီး ဈေးကွက်မှာ စစ်မှန်ပြီး အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို ဖြန့်ဖြူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
The results of those continuous efforts are the certificates and awards voted by the state and consumers for Viet An.
မလျှော့တဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် Viet An ကုမ္ပဏီဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ၀ယ်ယူသူတွေမှ ပေးအပ်တဲ့ ဆုတံဆိပ်များစွာကို ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Some cups that Viet An has won ( Viet An မှဆွတ်ခူးခဲ့သော ဆုတံဆိပ်အချို့)
Why should use VACGF30006in 1 automatic filling machine
( VACGF 30006in 1 ကို ဘာကြောင့်သုံးသင့်တာလဲ)
The needs of the new era (မျက်မှောက်ခေတ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်များ)
In the current era of industrialization and modernization, the application of modern technology in production and business is an essential requirement to each enterprise. Modern machines are gradually replacing labor force to improve economic efficiency, increase productivity, ensure safety, and lower product costs.
The same goes for the produce of bottled water. It is necessary to utilize automatic machines to replace human labor. Especially for this industry, the issue of food safety and hygiene is strictly required.
ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ စက်မှုခေတ်ကြီးမှာ ခေတ်မီနည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်သော စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအားလုံးအတွက် အရေးပါပါတယ်။ ခေတ်မီတဲ့ စက်တွေကို စီးပွါးရေး အားထုတ်မှုကို တိုးတက်စေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်ခြင်း၊ လုံခြုံမှု ရှိစေခြင်း နဲ့ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်း စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေနေရာမှာ အစားထိုး အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ ရေသန့်ဘူးတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း ထိုနည်းတူပါပဲ။ လူသားအလုပ်သမားတွေကို အစားထိုးဖို့ဆိုရင် အော်တိုစက်တွေကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေသန့်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် အစားအသောက်ရဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုက အရမ်း လိုအပ်ပါတယ်။
Bottle filling machine of international standards (နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံနှုန်းများနှင့် ဘူးတွေကို လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်)
The machine is designed withamodern, compact industrial design. Some main parts of this 6-in-1 filling machine are made from high-grade stainless steel, which doesn't rust and is easy to clean.
This VACGF3000 machine with6state-of-the-art automatic steps will make the bottling filling process much faster than other filling machines on the market.
The entire production and installation process of the machine complies with technical standards and is strictly monitored to ensure meeting ISO 9001:2015 standard - the most rigorous international standards currently. Model VACGF3000 has been registered by Viet An exclusively for the VA trademark at the National Office of Intellectual Property of Vietnam No. 250969.
ဒီစက်ကို ခေတ်မီပြီး သိပ်သည်းတဲ့ စက်ရုံသုံးဒီဇိုင်းနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့အချို့ အဓိက အစိတ်အပိုင်းတွေကို သံချေးမတက်ဘဲ သန့်ရှင်းရလည်း လွယ်ကူတဲ့ အဆင့်မြင့် စတိန်းလက်စ်စတီးနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၆ ဆင့်ကြောင့် ဒီစက်ဟာဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ အခြားစက်တွေထက် ပိုပြီးမြန်မြန်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးက နည်းပညာဆိုင်ရာ စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ယခုအခါ စည်းကမ်းအတင်းကျပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်း ISO 9001:2015 နဲ့ အညီ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ VACGF 3000 စက်ကို Viet An ကုမ္ပဏီမှ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ မူပိုင်ခွင့် နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ ဖြင့် VA ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်အတွက် မှတ်ပုံတင်ထားပါတယ်။
Certificate of brand VA- ISO 9001: 2015 standard (ကုန်ပစ္စည်း၏ VA- ISO 9001:2015 စံနှုန်း လက်မှတ်)
Not only qualified for use in Vietnam, VACGF3000 bottle filling machine VACGF3000 with6automatic steps is also eligible for export to ASEAN countries.
အဆင့် ၆ ဆင့် ပါတဲ့ VACGF3000 စက်ဟာ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာပဲ အရည်အချင်းပြည့်မီတာ မဟုတ်ဘဲ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထိ တင်သွင်းဖြန့်ချီဖို့ အဆင့်မီပါတယ်။
6 mandatory automatic steps integrated into VACGF3000 (VACGF 3000 စက်တွင် မဖြစ်မနေပါရှိမည့် အော်တိုအဆင့်များ)
1. Air conveyor (လေဖြင့် သယ်ယူပေးသောစက်)
Supply the bottles automatically
Put the bottles together
ဘူးတွေကို အတူတကွ ထားပေးခြင်း
The VACGF3000 Model is equipped with an air conveyor system to ensureacapacity of up to 3000 bottles per hour. This isavery important step in the production process.
VACGF3000 စက်တွင် တစ်နာရီမှာ ဘူး ၃၀၀၀ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ လေဖြင့် သယ်ယူပေးတဲ့စက် တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီအဆင့်က ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
No regular maintenance required, easy to install
No leakage, contamination during operation
Relevant to we area
Manpower reduction, productivity improvement with air conveyor system
ပုံမှန် ထိန်းသိမ်းစရာ မလိုဘူး၊ တပ်ဆင်ရတာ လွယ်ကူတယ်
လုပ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်း ယိုထွက်ခြင်း ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သင့်တော်တယ်
လူအင်အားလျှော့ချနိုင်တယ်၊ လေဖြင့်သယ်ယူပေးတဲ့စက် စနစ်ကြောင့် ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားတယ်
ခေတ်မီတဲ့ ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်တယ်
2+3+4 Automatic bottle washing, filling, capping steps
(၂+၃+၄ အော်တို ဆေးကြောပေးခြင်း၊ ဖြည့်ပေးခြင်းနှင့် အဖုံးတပ်ပေးခြင်း အဆင့်များ )
The empty bottles are transferred to 8 washing heads through the gear conveyor. The empty bottles are rotated 180 degrees by the clamps then. 8 bottles of water will respectively be kept and washed thoroughly (both inside and outside) with purified water through the spring clamp system. The bottles, after being washed clean, are sent to the extractor through the gear conveyor system.
ဘူးလွတ်တွေကို ဂီယာရွေ့လျားစက်ကို ဖြတ်ပြီး ဆေးကြောပေးတဲ့ခေါင်း ၈ ခေါင်းဆီ ပို့ပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်မှာ ဘူးလွတ်တွေက ညှပ်ကြောင့် ၁၈၀ံလှည့်နေပါမယ်။ ဘူးတွေကို ၈ ဘူးစီ ခွဲထုတ်ပေးပြီး စပရင်ညှပ်စနစ်ကို ဖြတ်ပြီး ဘူးအတွင်းအပြင်ကို ရေသန့်နဲ့ နှံ့နှံ့စပ်စပ် ဆေးကြောပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကြောပြီးတဲ့ ပုလင်းတွေကို ဂီယာရွေ့လျားစက်စနစ်ကို ဖြတ်ကာ လေဆိုးထုတ်ပန်ကာဆီ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The bottles, after being washed clean, are sent to the filling machine through the gear conveyor system. There are 8 built-in filling heads here which operate according to the principle of fixing weight of the liquid surface. The filling process is operated quickly and precisely with no leakage. The filling system is equipped withasensor so that the filling process will automatically stop when the programmable water level is reached. High accuracy ensured. Fast filling speed with the capacity of 3000 bottles of 350ml, 500ml per hour and 800 to 1000 bottles of 1500ml per hour.
ဆေးကြောပြီးသားဘူးတွေကို ဂီယာရွေ့လျားစက်ကို ဖြတ်ပြီး လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ဆီကို ရွှေ့ပေးပါတယ်။ ဒီစက်မှာ အရည်ရဲ့ မျက်နှာပြင်အလေးချိန်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းဥပဒေနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ ခေါင်း ၈ ခု ပါဝင်ပါတယ်။ လောင်းဖြည့်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်က မြန်မြန်လုပ်ဆောင်ပြီး အရည်စိမ့်ထွက်မှုလည်း မရှိပါဘူး။ လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စနစ်မှာ ပရိုဂရမ်ရဲ့ ရေလယ်ဗယ်ရောက်တဲ့အခါ အော်တိုရပ်သွားတဲ့ ဆင်ဆာပါရှိပါတယ်။ စစ်မှန်မှုမြင့်မားကြောင်း အာမခံပါတယ်။ ဖြည့်ပေးတဲ့နှုန်းက မြန်ပြီး 350 ml,500 ml ဘူးတွေကို တစ်နာရီမှာ ဘူး ၃၀၀၀ ဖြည့်နိုင်ပြီး 1500 ml ဘူးတွေကို တစ်နာရီမှာ ဘူး ၈၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ ထိ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
+ Automatic capping
The plastic bottles, after being fully filled, will be sent to the bottle capping part through the gear conveyor system. The3built-in capping heads integrated here will operate the bottle capping process. The cap tightening force can be easily adjustable at the control panel to ensure that the caps are perfectly attached to the bottle with no damage.
ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့ ပလပ်စတစ်ဘူးတွေကို ဂီယာရွေ့လျားစက်ကို ဖြတ်ပြီး ဘူးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ အပိုင်းကို ပို့ပေးပါတယ်။ ဒီမှာပါတဲ့ ခေါင်း ၃ ခုက ဘူးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်။ အဖုံးတွေက ဘူးတွေမှာ ပျက်စီးမှု မရှိဘဲ သေချာကပ်နေအောင် အဖုံးတပ်ပေးတဲ့အားကို ထိန်းချုပ်ဘောင်မှာ ညှိပေးပါတယ်။
5. Automatic Cap Loading Machine အဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက်
As mentioned in the previous article, that the bottle caps are reversed because of no using the automatic bottle cap loader isafairly common error with the VACGF2000 series. VACGF2000 usesacap compartment system and loads the caps manually, the reversing rate is about 3%. This hasasignificant effect on operating capacity and requiresasupervisor to monitor the operation process.
အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုပဲ အော်တိုအဖုံးသယ်တဲ့စက်ကို မသုံးတာကြောင့် အဖုံးတွေ ပျက်စီးရတာက VACGF 2000 မှာ ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြသနာပဲ ဖြစ်တယ်။ VACGF 2000 စက်ဟာ အဖုံးအကန့်စနစ်သုံးပြီး လူကိုယ်တိုင် တပ်တာကြောင့် ပျက်စီးမှုနှုန်းက ၃% လောက်ရှိတယ်။ ဒါက လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းအားပေါ်မှာ မြင်သာတဲ့ ထိခိုက်နစ်နာမှုရှိပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထ်ိန်းညှိဖို့ အကြံပေးလည်းး လိုအပ်ပါတယ်။
With6in 1 automatic bottle filling machine- VACGF3000, you can completely overcome the above limitation thanks to this automatic bottle cap loading machine.
These bottle caps are filled into the cap tank of the loading machine. The conveyor motor system sends the bottle caps up to the position that is connected to the capping part. There is an eye sensor system integrate into the connector for counting the number of bottle caps and an air blowing system to blow the caps into the duct.
A special feature of this automatic cap loading machine is that 100% of the bottle caps are guaranteed in the correct direction. The machine will automatically supply more caps or stop supplying depending on the quantity left in the cap duct.
VACGF 3000 စက်မှာ ပါဝင်တဲ့ အော်တိုအဖုံးသယ်ပေးတဲ့စက်ကြောင့် အပေါ်က အခက်အခဲတွေကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ အဖုံးတွေကို အဖုံးတွေသယ်တဲ့ စက်ရဲ့ တိုင်ကီထဲမှာ ထည့်ထားမှာ ဖြစ်တယ်။ရွေ့လျားစက်မော်တာစနစ်က အဖုံးတွေကို အဖုံးတပ်ပေးတဲ့ အပိုင်းနဲ့ ဆက်ထားတဲ့ နေရာဆီ ပို့ပေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ဆက်ပေးတဲ့ အရာမှာ ဘူးအဖုံးတွေရဲ့ အရေအတွက်ကို ရေပေးတဲ့ မျက်လုံးဆင်ဆာစနစ်နဲ့ အဖုံးတွေကို ပြွန်ထဲကို မှုတ်ပေးတဲ့ လေမှုတ်စနစ် ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီစက်ရဲ့ အထူးလက္ခဏာကတော့ ၁၀၀% သော အဖုံးတွေက ဦးတည်ရာမှန်တယ်လို့ အာမခံပါတယ်။ ဒီစက်က အဖုံးပြွန်မှာရှိတဲ့ အဖုံးအရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး အဖုံးပေးခြင်း ရပ်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပါတယ်။
6. Anomaly inspection machine (မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးသောစက်)
Anomaly inspection machine ( မူမမှန်မှု စစ်ဆေးပေးသောစက်)
● Inspect anomaly inside the bottles In the production of pure water, factors of food hygiene and safety are always required to be ensured. Therefore, after being filled, capped, and labeled, it is crucial that the water bottles are thoroughly inspected with the anomaly inspection machine.This machine is used to inspect anomaly of the bottles according to probability.
မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးသည်။ရေသန့်ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်ပြီး လုံခြုံမှုရှိရေးက သေချာစေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လောင်းဖြည့်ခြင်း အဖုံးတပ်ခြင်းနဲ့ လေဘယ်တပ်ခြင်းတွေ ပြီးသွာတဲ့အခါ ရေဘူးတွေထဲကို ဒီစက်နဲ့ စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ ဒီစက်က ဖြစ်နိုင်ချေပေါ်မူတည်ပြီး ဘူးတွေထဲက မူမမှန်မှုကို စစ်ဆေးပေးပါတယ်။
Plastic conveyor ( ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် )
This isaconnecting part to transfer the bottles automatically and quickly with no manpower required.
ဒါက ဘူးတွေကို လူအင်အားမလိုအပ်ဘဲ အော်တိုလျင်မြန်စွာ ရွှေ့ပေးတဲ့ စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Other automatic stages - purchased separately (optional)
Besides the above6steps, you can additionally invest:
အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်အပြင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလို့ ရပါသေးတယ်။
1. VALS4000 bottle loading and arranging machine: (VALS 4000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီးစီပေးသောစက် )
VALS4000 bottle loading and arranging machine (VALS 4000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီးစီပေးသောစက် )
The semi-automatic bottle loading and arranging machine will help you reduce labor cost, save expenses and improve the capacity. With this VALS4000 bottle loading and arranging machine, you will be able to save 1 to2labors to arrange the bottles and transfer them to the air conveyor.
တစ်ဝက်အော်တိုဘူးတွေသယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်သည် အလုပ်သမားကုန်စရိတ် လျှော့ချရန်၊ ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာရန် နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း တိုးတက်ရန် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီစက်ကြောင့် ဘူးတွေကို စီပေးပြီး လေမှုတ်ကိရိယာဆီ ရွှေ့ပေးတဲ့ အလုပ်သမား ၁ ယောက်ကနေ ၂ ယောက်ထိ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Technical specification of bottle loading and arranging machine
ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဖော်ပြချက်များ
Capacity (BPH) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2000-4000
Type of bottle -2mold (ml) ဘူးအမျိုးအစား-၂ မိုလ် 300-1500
Power capacity (kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 0.75
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 1200X1500X900
Weight (Kg) အလေးချိန် 150
Price (USD) ဈေးနှုန်း
2. Heat membrane shrinking machine:
အပူဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
The machine uses the heat of steam to shrink the membrane, make it wrapped into the bottles. With proper heat, the membrane is ensured not to be wrinkled.
ဒီစက်က အလွှာကို ရှုံ့ပေးပြီး ဘူးမှာ ကပ်နေစေပါတယ်။ သင့်တင့်တဲ့ အပူကြောင့် အလွှာကို ရှုံ့မသွားစေပါဘူး။
Technical specifications of the Heat membrane shrinking machine
အပူဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Capacity (cap/h) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2000-4000
Power capacity (kw/h) ပါဝါ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 18
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား "1800x500x1700"
Weight (Kg) အလေးချိန် 48
Price (USD) ဈေှးနှုန်း
3. Inkjet printers (မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်သည့် ပုံနှိပ်စက်)
Inkjet printers မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်သည့် ပုံနှိပ်စက်
This isamachine imported from Japan.
ဒီစက်ကို ဂျပန်ပြည်ကနေ တင်သွင်းထားပါတယ်။
The expiry date is printed with the inkjet technology
သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ကို ဒီစက်နဲ့ ပုံနှိပ်ပါတယ်။
The printing is nice and sharp.
The printing speed is high.
Dirty ink can be automatically washed at the nozzles according to the programmed software system. No clogging phenomenon like other inkjet printers on the marketSuitable for printing onavariety of materials, including pet plastic bottles. Provide the customers with clear information about the production dates and expiry dates.ေ
ပုံနှိပ်တဲ့ အရှိန်က မြင့်တယ်။
ညစ်ပတ်နေတဲ့ မင်တွေကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်အရ နှုတ်သီးကို သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ဈေးကွက်က တခြားစက်တွေလို မင်ပိတ်တာမျိုးလည်း မရှိပါဘူးပက်တ်ပလပ်စတစ်ဘူးတွေ အပါအ၀င် အခြားသော ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ပုံနှိပ်လို့ ရပါတယ်။ ၀ယ်ယူသူတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ရက်၊ သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့ရက်တွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အချက်အလက်ကို ရှင်းလင်းစွာ ပေးလိုက်ပါ။
Technical specifications of the Inkjet printer
မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်သည့် ပုံနှိပ်စက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
Max-print-line အများဆုံး ပုံနှိပ်သည့်လိုင်း 3
Power ပါဝါ 240V
Size (LxWxH) (mm) အရွယ်အစား 400*320*527
Weight (Kg) အလေးချိန် 27
4. VAGS6000 Semi-automatic log membrane shrinking machine
VAGS6000 တစ်ဝက် လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
VAGS6000 Semi-automatic log membrane shrinking machine
Features: Semi-automatic log membrane shrinking with high capacity
With this machine, the capacity for 6, 12, 24 bottle log shrinking will be further improved compared to manual shrinking methods.
Smooth, beautiful log membrane shrinking
လက္ခဏာသွင်ပြင်များ : လုပ်ဆောင်မှုမြင့်တဲ့ တစ်ဝက်လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
ဒီစက်နဲ့ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင် လူကိုယ်တိုင်လုပ်တာထက် ၆၊ ၁၂၊ ၂၄ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ပိုမြင့်တယ်။
ချောမွေ့ပြီး လှပတဲ့ လော့အလွှာရှုံ့ခြင်း
Technical specifications of the Semi-automatic log membrane shrinking machine
တစ်ဝက် လော့အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
Capacity (a log of 24 500ml bottles/hour) လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 4000-6000
Power capacity -(kw/h) ပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 18
Dimension (LxWxH) (mm) အတိုင်းအတာ 4500*1000*2100
Technical specifications of - VACGF30006in 1 automatic filling machine
VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
The machine is manufactured using the most advanced filling technology of the United States
ဒီစက်ကို US ရဲ့ခေတ်အမီဆုံး လောင်းဖြည့်တဲ့ နည်းပညာနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
The machine is designed with6automatic steps - the most advanced technology of the United States. VACGF3000 machines are either installed by Viet An or directly imported from America, Italy, Taiwan, China or per customers’ requests. The entire production and assembly process ensures ISO 9001:2015 standard.
ဒီစက်ကို US ရဲ့ ခေတ်ရှေ့အပြေးဆုံး နည်းပညာဖြစ်တဲ့ အော်တိုလုပ်ဆောင်တဲ့ အဆင့် ၆ ဆင့်နဲ့ ဒီဇိုင်းဆင်ထားပါတယ်။ VACGF 3000 စက်တွေကို Viet An မှလည်း ထုတ်လုပ်သလို ၀ယ်ယူသူတွေရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ အမေရိကန်၊ အီတလီ၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်တို့မှလည်း တိုက်ရိုက်တင်သွင်းပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ တပ်ဆင်မှုလုပ်ငန်း အကုန်လုံးက ISO 9001:2015 စံနှုန်းနဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။
Smart control panel စမတ်ကျသော ထိန်းချုပ်ဘောင်
All the washing, filling, capping process is controlled by PLC control panel system withatouch screen mounted on the filling machine. The speed button attached here makes it simple and easy to adjust the filling speed up or down.
ဆေးကြောခြင်း၊ ဖြည့်ပေးခြင်းနဲ့ အဖုံးတပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကို လောင်းဖြည့်တဲ့စက်မှာပါတဲ့ တို့ထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဖန်သားပြင်ပါရှိသော PLC ထိန်းချုပ်ဘောင်နဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ ဒီစက်မှာပါတဲ့ အရှိန်နှုန်းခလုတ်က လောင်းဖြည့်ပေးတဲ့ အရှိန်အတက်အကျကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ထိန်းညှိနိုင်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
High capacity: မြင့်မားသော လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း
6 automated steps integrated Working capacity is equal to 10 operators. Therefore, when using Viet An’s VACGF3000 automatic bottle filling machine you will savealot of labor costs while ensuring labor productivity. Production safety assurance A particularly modern factory is built.
အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ရဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းက အော်ပရေတာ ၁၀ ယောက်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ဒါကြောင့် Viet An က ထုတ်တဲ့ VACGF 3000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကို သုံးခြင်းဖြင့် အလုပ်သမားစရိတ် သက်သာစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားစေတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ ခေတ်မီသောစက်ရုံ တည်ဆောက်နိုင်တယ်။
A wide range of bottles to be filled ဘူးတွေအများကြီးကို ဖြည့်နိုင်ခြင်း
It is necessary to createawide variety of bottled water products to meet multiple usage needs. In the past, with conventional filling machines, you could only fillacertain bottle size. This affects the production process and costs investment.
Now with VACGF3000 6-in-1 automatic bottle filling machine of Viet An, you will not have to worry about that problem anymore. This machine is designed to fillaof bottles such as 350 ml bottles, 500ml bottles and 1500ml bottles.
မြောက်မြားစွာသော လိုအပ်မှုတွေအတွက် ရေသန့်ဘူးထုတ်လုပ်မှုကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဖန်တီးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းက ရိုးရိုးသာမန်စက်တွေကြောင့် ဘူးအရွယ်အစားတစ်ခုတည်းကိုပဲ ဖြည့်နိုင်တယ်။ ဒါက ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ အရင်းအနှီးကို ထိခိုက်စေတယ်။ အခုတော့ Viet An က ထုတ်တဲ့ VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက်ကြောင့် အဲ့ဒီပြသနာကို ထပ်ပြီး စိုးရိမ်နေစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ဒီစက်က 350 ml,500 ml,1500 ml စတဲ့ ဘူးတွေကို ဖြည့်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
When producing with 350ml, 500ml bottles, you do not need to change anything. However, to fill 1,500ml bottles, you will need to change the mold set of the corresponding bottle.
350 ml,500 ml ဘူးတွေကို ဖြည့်တဲ့အခါ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် 1500 ml ဘူးတွေကို ဖြည့်တဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာဘူးရဲ့ ပုံစံခွက်အစုံကို ချိန်းပေးရပါမယ်။
Required time to change the molds might take about 1 hour. Thus, you can conduct changing molds after every manufacturing shift to ensure productivity as well as working time.
ပုံစံခွက်ကိုပြောင်းတာက တစ်နာရီလောက်ပဲ ကြာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ထုတ်လုပ်နှုန်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ချိန်ကို သေချာစေဖို့ ထုတ်လုပ်ခြင်း တစ်လှည့်ပြီးတိုင်း ပုံစံခွက်တွေကို ပြောင်းပေးရပါမယ်။
Invest in installation of VACGF3000 6-in-1 automatic bottle filling machine
VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်တွင် မြုပ်နှံခြင်း
Currently, creatingamodern, automated production model is more essential than ever. The reason is that, in response to the fierce competition in the market, improving quality and reducing costs has always been noticed by many business owners. If you haveafactory producing purified water, bottled water, and want to own an automatic bottling machine with these6steps, don’t hesitate to reach us now at 0949 414141
ခေတ်မီတဲ့ အော်တိုပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးခြင်းက အလွန်အရေးပါလာပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကတော့ ဈေးကွက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်းတို့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ သင်က ရေသန့်စက်ရုံရှိပြီး အော်တိုအဆင့် ၆ ဆင့်ပါတဲ့ ဒီစက်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဖုန်း-၀၉ ၄၉ ၄၁၄၁၄၁ ကို ဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်။
Space for installation of VACGF3000 bottle filling machine
VACGF 3000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးတဲ့စက် တပ်ဆင်ရန် နေရာ
It is recommend that you should prepare an adequate area to install this VACGF3000 6-in-1 automatic bottle filling machine Please refer to the instructions below to prepare the installation area properly
Images of installation area
In addition to this VACGF3000 6-in-1 automatic bottle filling machine, Viet An also offers many other machines such as bottle blowing machine, water purification line for your reference.
ဒီ VACGF 3000 စက်ကို တပ်ဆင်မယ်ဆိုရင် နေရာအလုံအလောက်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တပ်ဆင်ဖို့ ဧရိယာပြင်ဆင်ရန် အောက်က လမ်းညွှန်ချက်ကို ကြည့်ပေးပါ။
VACGF 3000 စက်အပြင် Viet An ကုမ္ပဏီမှ အခြားသော စက်များဖြစ်တဲ့ ရေဘူးမှုတ်စက်၊ ရေသန့်စင်ပေးသော လိုင်းတွေလည်း ထုတ်လုပ်ပါတယ်။
Technical specifications of VACGF 3000 automatic filling machine
VACGF 3000 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
A. VACGF3000 FILLING MACHINE -6MUST -BUY ITEMSVACGF 3000 လောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ ၀ယ်ကိုဝယ်ရမည့် အဆင့် ၆ ဆင့်
Washing head ဆေးကြောပေးသောခေါင်း 8
Filling head ဖြည့်ပေးသောခေါင်း 8
Capping head အဖုံးတပ်ပေးသောခေါင်း 3
VACGF Capacity (350ml bottles/h) VACGF လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2,500- 3,000
Machine capacity (500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 2,500- 3,000
Machine capacity (1,500ml bottles/h) စက်ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း 700-1,000
Power ပါဝါ 2.24
Pressure ဖိအား 0.6-0.8MPA
Bottle size ဘူးအရွယ်အစား Φ55-Φ100
Bottle height ဘူးအမြင့် 100-320
Electricity supply လျှပ်စစ်အား ပေးပို့မှု 380v-50hz
3 in 1 Dimension(LxWxH) (mm)3in 1 အတိုင်းအတာ 2100*1500*2200
Weight အလေးချိန် 1500
Air conveyor လေဖြင့် သယ်ယူပေးသောစက် 2000*220*1000
Cap loading machine (LxWxH) (mm) အဖုံးသယ်ပေးသောစက် 1200*950*3000
Anomaly inspection machine (LxWxH) (mm) မူမမှန်မှုစစ်ဆေးပေးသောစက် 600*200*1000
Plastic conveyor (LxWxH) (mm) ပလပ်စတစ် ရွေ့လျားစက် 10000*160
Listing price (USD) ဈေးနှုန်း
B. AUTOMATIC STEPS (PURCHASE SEPARATELY) TO BE INTEGRATED INTO VACGF30006IN 1 FILLING MACHINE
VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်၏ သီးခြားဝယ်ယူနိုင်သော အဆင့်များ
Model Price (USD) ဈေးနှုန်း
1.VALS4000 bottle loading and arranging machine
1. VALS 4000 ဘူးတွေကို သယ်ပေးပြီး စီပေးသောစက်
2. VAHS4000 Heat membrane shrinking machine
2. VAHS 4000 အပူဖြင့် အလွှာကို ရှုံ့ပေးသောစက်
3. VA22000 Inkjet printers VA22000
မင်စက်ကလေးများဖြင့် ပုံဖော်ပေးသော ပုံနှိပ်စက်
4. VAGS6000 Semi-auto film wrapping machineVAGS6000 တစ်ဝက်အော်တိုဖလင်ထုတ်ပေးသောစက်
Hỏi đáp & đánh giá VACGF 30006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
4 in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးပြီး အဖုံးတပ်ပေးသောစက် VACGF 2000
VACGF 50006in 1 ဘူးတွေကို အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF80006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF120006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF 150006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF 200006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်
VACGF 240006in 1 အော်တိုလောင်းဖြည့်ပေးသောစက်